Indawo Yemidlalo * * * - I-Airbnb
Indawo Yemidlalo * * *
Feričanci, Osječko-baranjska županija, Croatia
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguHrvoje
I-Villa entle ikulindile kwindawo encinci, ethe cwaka - Ferians. Umhlaba omninzi ulawulwa yinkundla yentenetya, ibala lebhola yevoli, ibala le-bowling, i-tennis yetafile, indawo enkulu eluhlaza yebhola encinci kunye nenkqubo yabantwana abaninzi. Ngenkqubo eyahlukahlukeneyo yezemidlalo, iVilla inikezela ngendawo yokoja kunye nepuli yokuhlamba ilanga, elungele ukuphumla nokuhlaziya ebudeni beentsuku zehlobo.
Abathandi bendalo baza konwabela ukuhamba okanye ukuhamba ngebhayisekile kwiflethi yokubhiyozela, ukuzolula indawo yonke, kufutshane neendlela zewayini. Kwabo bafuna iglasi yewayini ehlaziyayo, sinika ubumnandi basekuhlaleni. Kukho nendawo yokoja inyama nesidiliya apho ungaphumla khona kwikhaya leholide okanye uye kuloba kwichibi labucala.
Fumanisa iindawo ezintle ezifumaneka kule ngingqi. I-Nasice, i-Orahovica - izixeko ezityebileyo kwiindawo zenkcubeko (inqaba yentsapho yase-Pajacceca, kwisixeko sase-Ruzica). Kufuphi neLake walnut nePeacock Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Hrvoje